राष्ट्रपति पुटिनको अवस्था गम्भीर कसरी घट्यो घटना ? थप विवरण (भिडियो) सहित — Imandarmedia.com
राष्ट्रपति पुटिनको अवस्था गम्भीर कसरी घट्यो घटना ? थप विवरण (भिडियो) सहित
काठमाडौं। रुस–युक्रेन युद्ध भएको दुई महिना बितिसकेको छ। यसैबीच रुसी सेनाले युक्रेनको सबैभन्दा ठूलो बन्दरगाह सहर मारिउपोल कब्जा गरेको छ। राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले मारियुपोलमाथि विजयको घोषणा गरेका छन्।
यो जितपछि पुटिनले रक्षामन्त्री सर्गेई शोइगुसँग भेट गरे । यसको एउटा भिडियो सार्वजनिक भएको छ। यो देखेपछि पुटिन गम्भीर बिरामी भएको अनुमान गरिएको छ। पुटिनको जीवन रहस्यले भरिएको छ।
उनको व्यक्तिगत जीवनको बारेमा कसैलाई धेरै जानकारी छैन। पुटिनले पनि आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा कहिल्यै खुलासा गरेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक भएको भिडियोमा पुटिनको हाउभाउ देखेपछि उनको स्वास्थ्यलाई लिएर प्रश्न उठिरहेको छ ।
पुटिन थाइराइड क्यान्सर वा पार्किन्सनजस्ता गम्भीर रोगसँग लडिरहेका छन् भन्ने धेरै मिडिया रिपोर्टमा दाबी गरिएको छ । धेरै क्यान्सर विशेषज्ञहरू पुटिनको साथमै हिँड्ने गरेको पनि रिपोर्टहरू छन्।
अहिले पुटिनले स्टेरोइड पनि सेवन गरिरहेका छन् । भिडियोमा रक्षामन्त्री सर्गेई शोइगुलाई भेट्ने क्रममा पुटिन लगातार टेबुलको कुना समातेर बसिरहेका थिए। दाहिने हातमा औँला मात्र अलिकति चलिरहेको थियो ।
उसको अनुहार पनि मलिन देखिन्थ्यो। यो तब हुन्छ जब कसैले केमोथेरापी ड्रग्स वा स्टेरोइडहरू लिइरहेको हुन्छ।भिडियोमा पुटिन लगातार आफ्नो खुट्टा हल्लाउँदै र खुट्टाको औंलाहरू फ्लेक्स गर्दै देखिए, जुन पार्किन्सन रोगको लक्षण हो।
स्विडेनी अर्थशास्त्री एन्डर्स अस्लुन्ड भन्छन् कि भिडियोमा पुटिन र शोइगु दुवै निराश देखिन्छन्।साथै दुबैको स्वास्थ्य पनि राम्रो देखिदैन । उनीहरु बस्ने तरिका पनि ठिक देखिदैन।
बैठकमा रक्षामन्त्री सर्गेई शोइगुलाई पनि स्क्रिप्ट पढिरहेको देखियो। सोइगुले बैठकमा राख्नुपर्ने कुरा कागजमा लेखेका थिए जुन उनले पढ्दै गरेको देखिन्थ्यो ।
यसबाहेक उनी हल्लिरहेका थिए, उनको शब्द पनि स्पष्ट रूपमा सुनिएको थिएन।यसअघि पुटिनको चेतावनीपछि रुसी रक्षामन्त्री सर्गेई शोइगुलाई हृदयघात भएको खबर आएको थियो ।
पछिल्लो समय युद्ध सुरु भएदेखि नै पुटिन र शोइगुको स्वास्थ्य बिग्रँदै गएको रिपोर्टमा भनिएको छ । उक्त भेटमा पुटिनले मारियुपोललाई मुक्त गर्ने कुरा पनि गरेका थिए । आफ्ना सिपाहीहरूलाई आक्रमण रोक्न पनि आग्रह गरे।
त्यसैगरी अजोभास्टल प्लान्टलाई घेरा हालेर सबै सडक बन्द गर्न निर्देशन दिइएको छ । युक्रेनी सैनिक र सर्वसाधारण यहाँ फसेका छन्।
युक्रेनी विदेश मन्त्रालयले भन्यो- ‘जनताको सुरक्षाको ग्यारेन्टीसहितको एजोभोस्टल प्लान्टबाट मानव करिडोर आवश्यक छ। तर पुटिनले प्लान्ट जाने सबै बाटो बन्द गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
तिनीहरू यहाँ अलपत्र सैनिकहरू र आम नागरिकहरूलाई भोक-तिर्खाले मार्न चाहन्छन्। जनतालाई पीडादायी मृत्यु दिन चाहन्छन् । त्यस्तै,अमेरिकाले युक्रेनमा आफ्नो दूतावास फेरि खोल्ने भएको छ।
अमेरिकाका विदेश मन्त्री र रक्षा मन्त्रीले युक्रेनको राजधानी किभमा दूतावास फेरि खोल्ने तयारी भएको पुष्टि गर्नु भएको छ।
रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि आफ्नालागि किभ असुरक्षित रहेको भन्दै अमेरिकाले दूतावासका सबै कर्मचारीहरुलाई फिर्ता बोलाउदै दूतावास अनिश्चितकालका लागि बन्द गराएको थियो।
अहिले भने युक्रेनलाई थप सहयोगको आवश्यकता परेको र त्यसका लागि दूतावासमार्फत गर्नु पर्ने भएकाले दूतावास खोल्न लागिएको अमेरिकी अधिकारीहरुको भनाई छ।
अमेरिकाले युक्रेनलाई विभिन्न आधुनिक हतियार र नगद समेत सहयोग दिने घोषणा गरिसकेको छ। केही सहयोग भने यसअघि देखि नै दिदै आएको थियो।
दुई महिना हुँदा पनि रुसले आक्रमण नरोकेपछि अमेरिकाले थप सहयोग गर्ने निश्कर्ष निकाल्दै दूतावास फेरि सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ।
रुसले युक्रेनमा गत फेब्रअरी २४ देखि युक्रेनमा आक्रमण सुरु गरेको छ। आक्रमणका कारण सयौँको मृत्यु भएको छ भने अरु कैयौ घाइते भएका छन्। त्यसैगरी हजारौँ विस्थापित भएका छन्।
दुई पक्षीय भिडन्तका कारण युक्रेनलाई ठूलो भौतिक तथा आर्थिक क्षति पनि भएको छ। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि विश्वकै आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा समेत नकारात्मक असर परेको छ।